Wonke umntu uyazi ukuba imbali yokudala izicathulo ineminyaka engaphezu kweyodwa. Ndiyazibuza indlela ookhokho bethu ababekude baqikelele ngayo ukuze bahlangule imilenze yabo. Yayiyiphi intambo yokuqala? Izicathulo zatshintsha njani ixesha? Liye lafikelela njani kubonakala kwanamhlanje?
Imbali yokudala izicathulo inomdla kakhulu. Emva koko, zonke iimbali zembali zineengcamango ezahlukeneyo zobuhle kunye nokulula. Urhulumente ngamnye, abantu ngabanye banemasiko kunye neempawu zabo. Ngoko ke, izicathulo zihlukeneyo.
Izambatho zokuqala zenziwe ngumntu kuphela njengendlela yokukhusela kwiimeko ezingqongileyo. Kwenzeke ngexesha lokutshintsha kwemozulu kwimozulu. Ngubani oya kuba wayecinga ukuba izicathulo zazingayi kuba yindlela yokukhusela, kodwa kwakhona ziyinxalenye yesitayela. Umlando-mlando waseMerika u-Eric Trinasus waseYunivesithi yangasese e-Washington waya kwisigqibo sokuba iziqhathaniso zokuqala zavela eNtshona Yurophu kwiminyaka eyi-26 ukuya kuma-30 engamawaka eyadlulayo. Ukwenza ezi zigqibo, usosayensi wancedwa ukuba afunde iigulane zabantu abahlala kule ntsimi ngexesha le-Paleolithic. Umphandi wanikela ingqalelo kwisakhiwo sezinzwane ezincinane. Waqaphela ukuba umnwe waba buthathaka, kwaye kamva kwakukho utshintsho kwimeko yonyawo. Le miqondiso ibonisa ukugqoka izihlangu. Ngokwezinzululwazi, iziqhathaniso zokuqala zazifana nezicathulo ezenziwe ngamabhokwe eebhere. Lezi ngqengqelo zentathu zazingeniswa ngaphakathi ngaphakathi ngotshani obomileyo.
KwiYiputa YaseYiputa, izicathulo zazibe zibonakaliso zobume bomnini. Izikhwama zavunyelwa kuphela kuFaro nakwiqela lakhe. Kuyathakazelisa ukuba umfazi kaFaro wayengekho phakathi kwabakhethiweyo, ngoko ke waphoqeleka ukuba ahambe engathanga zihlangu. Ngaloo mihla, izicathulo zazinzicathulo ezenziwe ngamagqabi esundu okanye ipapyrus. Kwinqanaba lezo zihlangule zaqhotyoshelweyo ngoncedo lweebhanki zesikhumba. AmaYiputa aphawulekayo ahlobisa le miqatha ngamatye anqabileyo kunye nemifanekiso enomdla. Ixabiso leembadada ezinjalo zaziphezulu kakhulu. Umlando-mlando waseGrike uHerodotus kwimisebenzi yakhe wathetha ukuba ukuveliswa kwesibini kweembada zepharao kwashiywe ngumlinganiselo owawulinganayo nengeniso yonyaka yesixeko esiphakathi. Nangona kunjalo, kwibhotwe likaFaro kunye nasethempelini kwakungavumelekile ukuba uhambe ngeembadada, ngoko ke izicathulo zashiywa ngasemva kombundu. Izicathulo zanamhlanje kunzima ukuzicingela ngaphandle kwesithende, esasungulwa ngqo kwiYiputa yamandulo. Ngokungafani neembadada ezixabisekileyo, izicathulo ezinezithende zazingagqithwanga ngabafihara kunye nabafundisi, kodwa ngabahlali abahlwempuzekileyo-abalimi. Iindlovu zenza ukugxininiswa okongeziweyo, kunceda abalimi bajikeleze kwilizwe elililo elililo.
Ama-Asiriya asendulo ayegqoka izihlangu, mhlawumbi ziphezulu kunezicathulo zamaYiputa. Izicathulo zaseAsiriya zaxhaswa ngomqolo ukuze zikhusele isithende. Ukongeza, babe nezicathulo eziphezulu kwiingoma zabo, ezibonakala zibonakala ngathi zanamhlanje.
AmaYuda amandulo eenkampini ayenemikhonto eyenziwe ngamatye, isikhumba, umhonkco kunye neboya. Ukuba umhambi ohloniphekileyo weza endlwini, umninimzi kufuneka athathe izicathulo zakhe ukuze abonise intlonipho yakhe. Ukongezelela, amaYuda anomdla onomdla. Ukuba emva kokufa komntakwabo kwakukho umhlolokazi ongenamntwana, umyeni wakhe unyanzelekile ukuba atshade naye. Kodwa lo mfazi wayenokukhulula indoda engatshatanga kulo msebenzi, ngokususa esidlangalaleni isuswe isihlangu. Emva koko, enye intombazana inokutshata omnye umfazi.
Izambatho zokuqala, zenzelwe nje ukukhusela unyawo kumonakalo, kodwa kunye nobuhle, zavela kwiGrisi yamandulo. Abagubisi beGrike babesazi indlela yokwenza izicathulo ezindala, kodwa nezicathulo ezinomqolo, izibhotshi ezingenayo i-sock - endomas, izibhotshi ezinomdla ngokukhwela. Ezi zihlangu ezintle zazifuna kakhulu phakathi kwabasetyhini bamaGrike. Kodwa isiganeko esibalulekileyo kwiimbali zeengubo zenziwe ngabafundi bamaGrike. Kuze kube ngoku, akukho ntlukwano phakathi kwezicathulo ezisekunene nakwesobunxele, zagqitywa kwimizekelo efanayo. Kuyathakazelisa ukuba ukuphuhliswa kwezicathulo kuncedise kwiidransan zakudala zamaGrisi. Kwakungenxa yokuba abo bahlambela ngeemfesane baxoxisa iibhokhwe zabo ngeenqwelwe zabo ngeendlela ezinokuba zilandele phantsi kunye nombhalo othi "Ndilandele."
Le nxalenye yincinci yembali yokwenza izicathulo. Eyona mincili kakhulu izayo.
Izicathulo zabasetyhini ezineenwele
Iibhotile ezinamafestile ezihamba phambili
Amaqhinga amabhinqa: i-hybrid yezicathulo kunye nezibhenqo
Izicathulo zezingane kumanyathelo okuqala
Izilwanyana zamanqaku ezikhuni
Ukugcinwa ngokugqithiseleyo kwabazali: inzuzo okanye intlungu kubantwana?
Ukubhiyozela Usuku lukaValentine kubantwana
Yiyiphi i-filler engcono kakhulu kwindlu yangasese yekati?
I-pastry ye-Puff kunye nemifuno
I-Horoscope ngo-Septemba 2016 yeCarcer
Ithetha ngokubhekiselele kwiminyaka yabafazi
Skordia nge nuts
Indlela entsha: iimpukane ezibukhali. Kutheni kufuneka babe nentombazana?
I-mousse ye-chocolate kunye ne-souffle kwelinye iresiphi
Isaladi kunye ne-squid